टुंगो छैन कसको भाग्य कहिले चम्किन्छ ! राम्रो ढुंगा भनेर खेलाउन ल्याएको बस्तु हिरा भएपछि… – Annapurna Post News
May 27, 2022 sujaLeaveaComment on टुंगो छैन कसको भाग्य कहिले चम्किन्छ ! राम्रो ढुंगा भनेर खेलाउन ल्याएको बस्तु हिरा भएपछि…
काठमाडौं । भनिन्छ, भाग्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कहिले चम्किन्छ, भन्न थाहा हुँदैन् ।अक्सर यस्ता समाचार आउँछन्, जब मानिसलाई अचानक ठूलो उपहार मिल्छ । ढुङ्गा भनेर ल्याएको वस्तु पनि अचानक बहुमूल्य रत्न बन्छ । भारत, मध्य प्रदेशकी एक महिलासँग यस्तै भएको छ ।
वास्तवमा यी महिलाले खानीमा उत्खननका क्रममा २.०८ क्यारेटको हीरा फेला पारेकी थिइन्, जसको मूल्य करिब १६ लाख भन्दा धेरै रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ ।
घटना मध्य प्रदेशको पन्ना जिल्लाको हो, जहाँ इटावाकला गाउँकी चमेली बाई नामकी महिलाको भाग्य अचानक चम्कियो । जिल्लाको कृष्ण कल्याणपुर पाटी क्षेत्रमा चमेली बाई र उनका श्रीमानले खानी भाडामा लिएका थिए, जहाँ खन्ने क्रममा यो हिरा भेटियो । आफूले फेला पारेको ढुङ्गा जस्तो देखिने २.०८ क्यारेटको हीरा भएको थाहा पाएपछि चमेलीबाईले हिराको कार्यालयमा जम्मा गरिन् ।
हिरा कार्यालयका अधिकारीहरुले आगामी लिलामीमा बिक्रीका लागि राखिने र सरकारको निर्देशन अनुसार मूल्य निर्धारण गरिने बताएका छन् ।
बिक्रीपछि सरकारको रोयल्टी र कर काटेर हिराको मूल्य महिलालाई दिइनेछ । यो हीरा लिलामीमा १६ लाख भन्दा धेरै रुपैयाँमा बिक्री हुन सक्ने बताइएको छ ।त्यही बेला जब महिलाका पतिले आफ्नी श्रीमतीले हिरा फेला पारेको थाहा पाए, तब उनको खुसीको सीमा रहेन ।
पेशाले किसान महिलाका श्रीमान् अरविन्द सिंहले भने, ‘यदि उनको हीराको लिलामीमा राम्रो मूल्य आयो भने त्यो पैसाबाट म पन्ना सहरमा घर बनाउनुछु । हामीले यस वर्षको मार्चमा एउटा सानो खानी भाडामा लिने सोच्यौं र आज हाम्रो भाग्य चम्क्यो ।’
तपाईलाई बताउ कि यस्तो यो कुनै पहिलो घटना होइन् । यसअघि पनि यस्ता धेरै घटना भएका छन्, जब एक व्यक्तिलाई अचानक हीरा मिल्यो र रातारात उनको भाग्य बदलियो ।
भर्खरै, सेप्टेम्बरमा, नोरिन वर्डेबर्ग नामक महिलाले क्यालिफोर्नियामा डायमन्ड स्टेट पार्कमा जाँदा ४.३८ क्यारेटको पहेंलो हीरा भेट्टाएकी थिइन् ।
May 24, 2022 suja
भारतको कर्नाटकबाट इञ्जीनियरिङ पढेका नवनिर्वाचित मेयर साह को हुन् ?